Gịnị na-samsung akwado video fromats?
Samsung akwado 3GP, FLV, WMV, MP4, AVI, MKV, XviD, DivX wdg, ka i nwere ike na-ezute mbipụta na-egwu egwu ndị a faịlụ gị Samsung igwe dị ka ndị a formats nwere ike ịnwe codecs nke na-agaghị dakọtara na ndị dị iche iche Samsung smart ekwentị ngwaọrụ mgbe ụfọdụ. Ọzọkwa, anyị maara n'eziokwu na Samsung adịghị natively na-akwado na formats MOV, mpg, AVCHD, DV, SWF, ASF na MOD wdg
Nke a bụ ebe a video Ntụgharị-abịakwute gị nnapụta na anyị dị nwere nri otu maka gị, Wondershare Video Converter Ultimate. Ka ịghọta ihe ọ bụ na otú ọ pụrụ ịbụ nke aka gị.
Samsung video Ntụgharị - Wondershare Video Converter Ultimate
The Wondershare Video Converter Ultimate bụ ọtụtụ ihe karịa nnọọ ọzọ video Ntụgharị, ọ bụ n'ezie a ngwá ọrụ na ike ịgwụcha agwụcha ndepụta nke ihe ndị na-i nwere ike ime na ya dị ka tọghatara, welie, dezie, download, hazie, ọkụ, kpọọ nakwa ekiri ọkacha mmasị gị videos na nso 159 formats.
Ọ bụ a ga-enwe maka Samsung ọrụ dị ka ọ na-akwado nta ọ bụla ọhụrụ smart ekwentị ngwaọrụ site na ika dị ka Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S III, Galaxy Tab, Galaxy Cheta, Galaxy Nexus, Galaxy S, captivate, i7500, Oge, Galaxy Spica,-adọrọ mmasị, Epic 4G, Mesmerize, Intercept, Mythic, Lekwasị anya i917 wdg
Olee otú iji Wondershare Video Converter Ultimate iji tọghata video ka Samsung igwe
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye Wondershare Video Converter Ultimate na kọmputa gị na mbụ, iji njikọ dị ka e n'elu n'ihi na. Mgbe ahụ malite ya na kọmputa gị ozugbo ọ e ọma arụnyere.
Nzọụkwụ 2: Site isi interface, pịa na Add Files bọtịnụ. Na-esote window kwesịrị ekwe ka ị họrọ videos ị chọrọ iji tọghata. Ozugbo i mere gị oke, abụọ click na videos na-amalite importing ha.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a, ọ bụ oge iji họrọ mmepụta format ka kwa gị Samsung ngwaọrụ. Gaa na mmepụta Format ngalaba nyere n'aka-nri n'akụkụ nke isi interface na pịa format image nyere n'ebe ahụ. Site ọzọ window, họrọ Ngwaọrụ> Samsung ịhụ a ndepụta nke na-akwado Samsung igwe na họrọ gị kpọmkwem ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 4: Ozugbo, ị na-eme na niile n'elu nzọụkwụ, nnọọ pịa tọghata button na ala nri akuku nke isi interface na-amalite video akakabarede. Mgbe akakabarede dị n'elu, ị nwere ike pịa na Open nchekwa button gaa ebe ebe converted video a na-echekwa ma nyefee ya na gị na Samsung ekwentị.
Otú nyefee vidiyo si na PC / Mac ka Samsung igwe
Anyị na-akwado ị na-eji Wondershare MobileGo maka ebufe vidiyo si na PC / Mac gị Samsung ekwentị dị ka ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke smart ekwentị ngwaọrụ wee na-eme ọrụ mfe na nanị ole na ole clicks.
Nzọụkwụ 1: Pịa ebe a iji ibudata ngwa n'ihi na Windows / Mac na wụnye ya. Ozugbo arụnyere ịga nke ọma, ẹkedori Wondershare MobileGo na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, jikọọ gị Samsung smart ekwentị na ngwaọrụ na kọmputa, na-eji WiFi ma ọ bụ eriri USB. Ngwa ga-enwe ike na-akpaghị aka ịchọpụta na-egosipụta gị na ngwaọrụ ozugbo ejikọrọ.
Nzọụkwụ 3: Pịa na bọtịnụ / nhọrọ Videos si sidebar nyere n'aka-ekpe n'akụkụ nke isi na ihuenyo. Site ọzọ ihuenyo, họrọ 'Tinye' aka ịchọta na ịgbakwunye videos na ị chọrọ nyefee na kọmputa gị ka gị na Samsung smart ekwentị. Mgbe ahụ, pịa 'Open' na-amalite transfer nke ahọrọ videos.
> Resource> Samsung> Samsung video Ntụgharị - video ka Samsung igwe